Free Thinker: လေအေးပေးစက် စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း နှင့် ထိန်းသိမ်းနည်း (Window Type)
လေအေးပေးစက် စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း နှင့် ထိန်းသိမ်းနည်း (Window Type)
လေအေးပေးစက် ၀ယ်တော့မည်ဆိုလျှင် သိထားသင့်သည့်အချက်များ
မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို အသစ်ဝယ်လာလျှင် ထိုပစ္စည်းနှင့်အတူ၊ လိုအပ်သော အပိုပစ္စည်း ကိရိယာအပြည့်အစုံ (accessories)၊ အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်(Operation Manual) သို့မဟုတ် စက်ပိုင်ရှင်လက်စွဲ(Owner’s Manual) ပါရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိဝယ်ယူသောပစ္စည်းအတွက် ထိုစာအုပ်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ မပါလာပါက ဆိုင်တွင်တောင်းယူရပါမည်။
ပစ္စည်းကို စတင် မတပ်ဆင်မီ၊ မသုံးစွဲမီ စက်နှင့်အတူပါလာသော ပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်ကို သေသေချာချာ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ဦးစွာဖတ်သင့်ပါသည်။ ထိုပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်ထဲ၌ စက်ပိုင်ရှင်တို့ သိသင့်သိထိုက်သည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် စသည်တို့ကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအချက်များကို သိထားခြင်းဖြင့် မလိုလား အပ်သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဘေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ မပျက်သင့်တာ မပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ စက်ကို စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပိုင်ရှင်လက်စွဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖြစ်နေလျှင် အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်သူများအဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရေခဲသေတ္တာ၊ လေအေးပေးစက် စသည်တို့မှာ ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီကိုလိုက်၍ အမျိုးအစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲပြားသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် သဘောတရားမှာ အတူတူပင် ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ စက်နှင့်ပါလာသော ပိုင်ရှင်လက်စွဲကို မဖတ်တတ်သူများအဖို့ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်လျှင်လည်း လုံလောက်ပါသည်။ စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး သိရုံမျှနှင့်မပြီးသေး။ လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးဘို့ရန်မှာ ပိုအရေးကြီးပါသည်။
စက်ကို တစ်နှစ် စသဖြင့် အာမခံပေးထားလျှင် ထိုအာမခံစာရွက်ကိုတောင်းကာ သေသေချာချာ သိမ်းထားရပါမည်။ အာမခံ သက်တမ်းအတွင်း စက်တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါက ၀ယ်လာသောဆိုင်မှ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းသည့်နေရာသို့ ပို့ကာ အခမဲ့ပြုပြင် ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ပြင်သည့်အခါ အာမခံစာရွက်ကို ပြရန်လိုပါသည်။ ထိုမျှသာမက ၀ယ်ယူထားသော ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း ကိုပါ သိမ်းဆည်းထားပါ။ ဤငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းဖြင့် သူတို့ဆိုင်မှ ၀ယ်လာသောစက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည်။
ပထမဦးဆုံးနှစ်များက စတင်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်မှာ လေအေးပေးစက်စနစ် မဟုတ်။ အခန်းအပူချိန်တွင် အစားအသောက်များ လျှင်မြန်စွာ ပုပ်သိုးပျက်စီးသဖြင့် ကြာရှည်ခံရန် ရေခဲသေတ္တာကို စတင်တီထွင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အပူချိန် ၄ ဒီဂရီ စင်တီ ဂရိတ် (၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အောက်တွင် ဘက်တီးရီးယားများ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနှုံး အလွန်နည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပြီးသည့် နောက် အစားအသောက်များကို ထိုအပူချိန်တွင် ထိန်းထားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် အမိုးနီးယားအရည်သည် အရည်ဘ၀မှ အငွေ့ပျံသွားလျှင် လေကိုအေးစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြ၏။ ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ကွန်ပရက်ဆာကိုသုံးပြီး ရေခဲလုပ်နိုင်သည့်နည်းကို John Gorrie ဆိုသူက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက် လေအေးပေးစနစ်ကို လူများဇိမ်ခံနိုင်ရေးထက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြံဆခဲ့ကြသည်။ ၁၉၀၂ ခုနှစ်၌ Willis Haviland Carrier ဆိုသူက ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ခေတ်သစ်လေအေးပေးစနစ်များ၏ ဖခင်ကြီးဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
သူတီထွင်ခဲ့သည်မှာ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန် ဖြစ်၏။ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကိုထိန်းထား နိုင်ခြင်းဖြင့် စက္ကူအရွယ်အစား နှင့် ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုတိကျစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Carrier ကပင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ The Carrier Air Conditioning Cmpany ကို ထူထောင်ကာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် Carrier သည် ကမ္ဘာ့လေအေးပေးစက်လုပ်ငန်းတွင် အကြီးမားဆုံး ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဈေးကွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိထားသူ ဖြစ်နေပေပြီ။
၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် Thomas Midgley က ယခင်သုံးခဲ့သော ဓါတ်ငွေ့များထက် ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်း စိတ်ချရသော ဖရီယွန် (Freon) ဓါတ်ငွေ့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်တွင် ရေခဲသေတ္တာ နှင့် လေအေးစက်များကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ လေအေးပေးစနစ်သုံး ဓါတ်ငွေ့များတွင်ပါဝင်သော CFC နှင့် HCFC ဓါတ်ငွေ့များမှာ ကမ္ဘာ့လေထုမှ အိုဇုန်းလွှာကို ပျက်သုဉ်းစေသည့်အတွက် အိုဇုန်းလွှာကို မထိခိုက်စေမည့် R 410a ကဲ့သို့သော ဓါတ်ငွေ့များကို တီထွင်သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။
ရေခဲသေတ္တာ နှင့် လေအေးပေးစက် တိုးတက်လာမှု ဖြစ်စဉ် သမိုင်း
၁၈၂၀ - လက်တွေ့ခန်းတွင် ရေခဲကို စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၈၂၄ - Michael Faraday က လေအေးပေးစက်အတွက် အသုံးတည့်မည့် စုပ်ယူမှုဆိုင်ရာသီအိုရီ ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၈၃၄ - Jacob Perkins ဆိုသူက ကွန်ပရက်ဆာစနစ်၏ ရှေ့ပြေးဖြစ်သည့် ပထမဦးဆုံး လူလုပ်ရေခဲစက်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
၁၉၀၂ - Willis Haviland Carrier က လေအေးပေးစက်သမိုင်း၏ အစဖြစ်သည့် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကိုထိန်းပေးသော လေအေးစက်ကို ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများတွင်သုံးရန် တီထွင်ခဲ့သည်။
၁၉၀၆ - Stuart W. Cramer က ထိုလေအေးပေးစနစ်ကို “Air Conditioning” ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၁၃ - ပထမဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေအေးပေးစနစ်ပြပွဲကို ချီကာဂိုတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၉၂၈ - Thomas Midgley, Jr က ဖရီယွန် (freon) ဓါတ်ငွေ့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၁၉၃၀ - အမေရိကန်သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်တွင် လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၆ - အခန်းလေအေးပေးစက်များ အ၀ယ်လိုက်လာသဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် အလုံးရေ သုံးသောင်းထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၃ - အခန်းလေအေးပေးစက်ရောင်းရနှုံးမှာ တစ်သန်းကျော်သွားသည်။ ဤသည်မှာ လေအေးပေးစက်၏ သမိုင်းမှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၅၇ - လည်ပတ်သော ဖိအားပေးစက် (rotary compressor) ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခင်ကသုံးနေသော လွန်းထိုးဖိအား ပေးစက် (reciprocating compressor) ထက် ပိုပြီးဝန်ကျဉ်း၊ ပိုပြီးထိရောက်သော လေအေးပေးစနစ်အဖြစ် တိုးတက်ခဲ့သည်။
၁၉၇၇ - Heat pump များကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ရာ ဆောင်းရာသီတွင် လေပူပေး၊ နွေရာသီတွင် လေအေးပေးစနစ်နှစ်မျိုးလုံးကို စက်တစ်မျိုးထဲသုံး၍ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ - ရေခဲသေတ္တာများတွင်ရော၊ လေအေးပေးစက်များတွင်ပါ Microprocessor ထိန်းချုပ်စနစ်ကို သုံးလာနိုင်သည်။
၁၉၉၂ - လေအေးပေးစနစ်သုံးဓါတ်ငွေ့များအတွက် R 502 ကို သုံးလာနိုင်သည်။
လေအေးပေးစက်ကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲတတ်စေရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်မှာလည်း ရေခဲသေတ္တာမှာ ကဲ့သို့ ပင် လေအေးပေးစက်တစ်လုံး အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် တည်ဆောက်ထားပုံကို အကြမ်းဖျဉ်းသိထားရန် လိုပါသည်။
ရေခဲသေတ္တာနှင့် လေအေးပေးစက်မှာ အလုပ်လုပ်ပုံခြင်း အတူတူပင်ဖြစ်၏။ ကြီးတာနှင့်သေးတာသာ ကွာသွားသည်။ ရေခဲသေတ္တာ၌ လေအေးများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မှုတ်သွင်းပေးသည်။ လေအေးပေးစက်က လေအေးများကို လူနေသည့် အခန်းများအတွင်း မှုတ်သွင်းပေးသည်။ ရေခဲသေတ္တာက အအေးပေးရမည့်အခန်းသေးသဖြင့် စက်သေးသည်။ လေအေးစက် က အအေးပေးရမည့် အခန်းကြီးသောကြောင့် စက်ကြီးသည်။ အခန်းပိုကျယ်လေ စက်ပိုကြီးလေဖြစ်၏။
လေအေးပေးစနစ်သည် အပူကိုစုပ်ယူခြင်း၊ စုပ်ယူလာသောအပူကို ထုတ်ပစ်ခြင်းတည်းဟူသော အပူကူးပြောင်းခြင်း (heat transfer) လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်၏။ ထိုလေအေးပေးစနစ် လည်ပတ်ရန် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ် လေးရပ်ပါဝင်သည်။
၁။ ဖိအားမြှင့်ခြင်း (Compression)
၂။ အပူထုတ်ခြင်း (Condensation)
၃။ ဖိအားလျှော့ချခြင်း (Expansion)
၄။ အပူစုပ်ယူခြင်း (Evaporation)
ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရန် လေအေးပေးစနစ်၌ အခြေခံအားဖြင့် အောက်ပါပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
၁။ ကွန်ပရက်ဆာ (Compressor)
၂။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် (Conderser Coil)
၃။ လက်ခံသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် အခြောက်ခံစက် (Receiver or Dryer)
၄။ ဖိအားလျှော့ဗား (Expansion Valve)
၅။ အီဗာပိုရေတာကွိုင် (Evaporator Coil)
၆။ ကွန်ဒင်ဆာနှင့် အီဗာပိုရေတာကွိုင်များကို လေမှုတ်ပေးမည့် ပန်ကာများ (Fans)
၇။ ထိုကိရိယာများကို ဆက်သွယ်ပေးမည့် ပိုက်လိုင်း (Tubing, closed loop system)
၈။ ဓါတ်ငွေ့ (Refrigerant)
လေအေးပေးစနစ်တွင် ဖိအားမြင့်ပိုင်း (high pressure side) နှင့် ဖိအားနိမ့်ပိုင်း (low pressure side) ဟု နှစ်ပိုင်းပါသည်။ ဖိအားမြင့်ပိုင်းတွင် ကွန်ပရက်ဆာအထွက်ပိုင်း၊ ကွန်ဒင်ဆာ နှင့် ဖိအားလျှော့ဗားအ၀င်ပိုင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဖိအားနိမ့်ပိုင်းတွင် ဖိအားလျှော့ဗားအထွက်ပိုင်း၊ အီဗာပိုရေတာ နှင့် ကွန်ပရက်ဆာအ၀င်ပိုင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ကွန်ပရက်ဆာက ၀င်လာသောဓါတ်ငွေ့များကို ဖိအားမြှင့်ပေးသည်။ ကွန်ဒင်ဆာက ဓါတ်ငွေ့ထဲတွင်ပါလာသည့် အပူများကို ပြင်ပလေထုအတွင်း စွန့်ထုတ်ပစ်သည်။ ဖိအားလျှော့ဗားက ဓါတ်ငွေ့၏ ဖိအားကို လျှော့ပေးသည်။ အီဗာပိုရေတာက အခန်းတွင်းရှိအပူများကို စုပ်ယူသည်။ အီဗာပိုရေတာမှ ထွက်လာသော ဖိအားနိမ့် ဓါတ်ငွေ့များကို ကွန်ပရက်ဆာက ဖိအား မြှင့်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်စပ်ပြီး အဆက်မပြတ်လုပ်စေလိုက်သောအခါ လေအေးပေးစနစ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဤသည်ကို (loop system သို့မဟုတ် closed system) အပိတ်စနစ် ဟု ခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤဓါတ်ငွေ့များသည် အခြားမည်သည့်နေရာသို့မှ ရောက်မသွား။ ထိုစနစ်အတွင်းတွင်ပင် ထပ်ပြန်တလဲလဲ လည်ပတ်နေ သည်။
လေအေးပေးစက်တစ်လုံး တည်ဆောက်ထားပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဖိအားမြင့်အပိုင်း။ ဓါတ်ငွေ့ကို ဖိအားမြှင့်လိုက်သောအခါ ဓါတ်ငွေ့၏ အပူချိန်လည်း တက်လာသည်။
၂။ ထိုဖိအားမြင့်၊ အပူချိန်မြင့် ဓါတ်ငွေ့များ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်အတွင်းရောက်သွားပြီး ကွန်ဒင်ဆာက အပူများကို လေထုအတွင်း စွန့်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကို ပန်ကာနှင့်မှုတ်ခြင်းဖြင့် အပူကို များနိုင်သမျှများများစွန့်ထုတ်စေသည်။ ထိုအခါ အပူချိန်ကျသွားသောအခါ ဓါတ်ငွေ့များ အရည်ဘ၀သို့ ပြောင်းသွားသည်။
၃။ ဖိအားမြင့်၊ အပူချိန်နိမ့် ဓါတ်ငွေ့ရည်အဆင့်
၄။ ထိုဓါတ်ငွေ့ရည်များကို expansion valve က ဖိအားလျှော့ချလိုက်သည်။
၅။ ထိုအခါ ဖိအားနိမ့်၊ အပူချိန်နိမ့် ဓါတ်ငွေ့ရည်ဘ၀ ရောက်သွားသည်။
၆။ ထို ဖိအားနိမ့်၊ အပူချိန်နိမ့်ဓါတ်ငွေ့များ အီဗာပိုရေတာကွိုင်များအတွင်း ၀င်ရောက်လာသောအခါ အခန်းအတွင်းမှ အပူများ ကို စုပ်ယူလိုက်သည်။
၇။ အခန်းအပူချိန်မှာ ဓါတ်ငွေ့ရည်၏ အရည်ဆူမှတ်ထက်မြင့်နေသဖြင့် ဓါတ်ငွေ့ရည်များဆူပွက်လာကာ အငွေ့ဘ၀သို့ ပြောင်းသွားသည်။ အခန်းတွင်းလေမှ အပူများကို စုပ်ယူလိုက်သဖြင့် အေးသွားသည်။ ၎င်းလေအေးများကို ပန်ကာဖြင့်မှုတ်ကာ အခန်းတွင်းပို့သည်။
၈။ အပူချိန်မြင့်နေသော (၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်) ဓါတ်ငွေ့ (superheated refrigerant vapour) ကို -
၉။ ကွန်ပရက်ဆာက ဖိအားမြှင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နောက်တစ်ပတ် ပြန်စသည်။
ဤစနစ်တွင်ပါသော ဓါတ်ငွေ့မှာ အငွေ့ဖြစ်လိုက်၊ အရည်ဖြစ်လိုက်ဖြင့် လည်ပတ်နေသည်။ အရည်ဆူမှတ် အလွန်နိမ့်သဖြင့် သာမန်အခန်းအပူချိန်တွင် အငွေ့အဖြစ်ရှိနေသည်။ သို့သော် အပူချိန်တစ်ခုတွင် အရည်ဘ၀သို့ပြောင်းသွားသည်။
လေအေးပေးရမည့် အခန်းအကြီးအသေးကိုလိုက်၍ လေအေးပေးစက် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အကြမ်ဖျဉ်းအား ဖြင့် လေအေးပေးစက်အမျိုးအစားကို ၅ မျိုးခွဲနိုင်သည်။
၁။ Portable Air Conditioner
၂။ Window Air Conditioner
၃။ Split Air Conditioner
၄။ Packaged Air Conditioner
၅။ Central Air Conditioning System တို့ဖြစ်၏။
ဤလေအေးပေးစက်များကို မည်သည့်နေရာ၌ သုံးသနည်း။ အကြမ်းအားဖြင့် Portable Air Conditioner များကို မိမိလိုသော အခန်းများတွင် သုံးနိုင်သည်။ အသေတပ်ဆင်၍ မထားသောကြောင့် ကြိုက်သည့်အခန်း၊ ကြိုက်သည့်နေရာသို့ ယူသွား နိုင်သည်။ စက်မှာသေးသဖြင့် လေအေးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာလည်း နည်းသည်။ ထိုစက်များကိုမူ ယာယီအတွက်သာ သုံးကြပါသည်။
Window Air Conditioner များကို အခန်းငယ်တစ်ခုချင်းအတွက် သုံးပါသည်။ Split Air Conditioner ကို အခန်း တစ်ခန်း၊ နှစ်ခန်း၊ သုံးလေးခန်း စသည်တို့အတွက် သုံးပါ သည်။ ပို၍ကျယ်သောအခန်းများ သို့မဟုတ် နှစ်ခန်းထက်ပိုသော အခန်းများ အတွက် Packaged Air Conditioner ကို သုံးပါ သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကျောင်း၊ ရုံး၊ စာကြည့်တိုက် စသည့် ကြီးမားသော အဆောက်အအုံကြီးများအတွက် Central Air Condition-ing system ကို သုံးပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤစာအုပ်သည် အင်ဂျင်နီယာများအတွက်မဟုတ်မူ၍ လူအများနားမလည်နိုင်သည့် ဤစနစ်များ အကြောင်း၊ အပူတွက်ပုံ၊ လေအေးပေးစက်အရွယ်အစား တွက်ချက်ပုံများကို မဖော်ပြတော့ပါ။ မိမိအတွက် သင့်တော်မည့် လေအေးပေးစက်ကို အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ရန်သာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မည်ကဲ့သို့သော လေအေးပေးစက်မျိုးကို ၀ယ်ရမည်နည်း။
လေအေးပေးစက်၏ အရွယ်အစားကို BTU (British Thermal Unit) ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုစက်က စုပ်ယူပေး နိုင်သော အပူပမာဏ ဖြစ်၏။ ၀ယ်လိုက်သော စက်သည် မိမိအခန်းအတွက် ငယ်လွန်းနေပါက လိုချင်သလောက် အေးမည် မဟုတ်။ မိမိလိုသည်ထက် ပိုကြီးသည့်စက်ကိုဝယ်လျှင် ဈေးပိုကြီးမည်။ ပိုက်ဆံပိုကုန်မည်။ ထို့ကြောင့် မိမိအတွက် သင့်တော် မည့်စက်အရွယ်ကို ၀ယ်တတ်ရန် လိုပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် မိမိအခန်း၌ အပူမည်မျှရှိသည်ကို သိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် အပူပမာဏကို အောက်ပါအတိုင်း ယူဆနိုင်ပါသည်။
အခန်းငယ် - ကြမ်းခင်းအကျယ် ၁၀၀ မှ ၃၀၀ စတုရန်းပေ အတွက် ၅၀၀၀ – ၆၀၀၀ BTU
အခန်းလတ် - ကြမ်းခင်းအကျယ် ၂၅၀ မှ ၅၅၀ စတုရန်းပေ အတွက် ၇၀၀၀ – ၈၂၀၀ BTU
အခန်းကြီး - ကြမ်းခင်းအကျယ် ၃၅၀ မှ ၉၅၀ စတုရန်းပေ အတွက် ၉၈၀၀ – ၁၂၅၀၀ BTU
ပို၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်းရပါမည်။
ဤနေရာတွင်မူ အိမ်များ၌အသုံးများသော Window Air Conditioner နှင့် Split Air Conditioner တို့အကြောင်းကို ဦးစားပေး ဖော်ပြသွားပါမည်။
Window Air Conditioner (၀င်းဒိုးတိုက်ပ် လေအေးပေးစက်)
Window Air Conditioner များမှာ များသောအားဖြင့် ပမာဏ ၈၀၀၀ BTU/hour မှ ၁၂၀၀၀ BTU/hour ထိ၊ ပါဝါအားဖြင့် ၇၄၀ ၀ပ်မှ ၁၂၂၀ ၀ပ်ထိ၊ အမ်ပီယာ ၆.၈ မှ ၁၁ ထိ၊ အရွယ်အစား ၁၈လက်မခွဲ x ၁၄ လက်မ x ၂၁ လက်မ။ ကြီးလျှင် ၂၄ လက်မ x ၁၅ လက်မ x ၂၂ လက်မခွဲ စသဖြင့် ရှိတတ်ပါသည်။ သို့သော် ဤအရွယ်များမှာ ခန့်မှန်းနိုင်ရန် အကြမ်းဖျဉ်း ဖော်ပြချက်မျှသာဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီ၊ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
၀င်းဒိုးတိုက်ပ် လေအေးပေးစက်တစ်လုံး တည်ဆောက်ပုံ
လေအေးပေးစက် တစ်လုံးတွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
ဤအမှတ်အသားကို တွေ့ပါက စာအုပ်ထဲတွင် ညွှန်ကြားထား သည့်အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာရန် လိုပါသည်။
ဤအမှတ်အသားဖြင့် ဖော်ပြထားသည်များကို လုံးဝမလုပ်ပါနှင့်။ စက်ပျက်ခြင်း၊ လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
ဤအမှတ်အသား ဖော်ပြထားပါက စက်ပျက်ခြင်း၊ လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေခြင်းများ ကြုံရတတ်သည် ဟု သတိပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ လေအေးပေးစက်ကို ကျွမ်းကျင်သူများအားသာ တပ်ဆင်ခိုင်းပါ။ နားမလည်သူများတပ်ဆင်ပါက စက်သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ ရှော့ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ လူအတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။
၀င်းဒိုးတိုက်ပ် လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ခြင်း
မှတ်ချက်။ ။ ယခုဖော်ပြမည့် လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်နည်းမှာ LG Window Type Air-Conditioner Model L8004R အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်၊ အရွယ်အစားကွာသွားသည်နှင့်အမျှ တပ်ဆင်နည်းမှာလည်း ကွာနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လေအေးပေးစက်ကို မည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်သည်ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းကိုသိလျှင် အခြားအမျိုးအစားများအားလည်း မိမိဉာဏ်နှင့် ချင့်ချိန်ကာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
လေအေးပေးစက်ကို တပ်ဆင်ရာတွင် စက်ပေါ်သို့နေရောင်တိုက်ရိုက်မကျစေရန် ကာကွယ်ထားပါ။ (အမိုးမိုးပေးထားပါ။) စက်နောက်တွင် အနည်းဆုံး လက်မ ၂၀ ခန့်နေရာလပ်ထားပေးပါ။ သို့မှ ကွန်ဒင်ဆာမှ အပူများလေထုအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ပစ်နိုင်မည်။ နံရံနှင့် လေအေးစက် နီးလွန်းလျှင် လေအေးပေးစက် အလုပ်လုပ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
လေအေးပေးစက် ကိုယ်ထည်အပြင်ပိုင်းကို အနည်းဆုံး ၁၁ လက်မ အိမ်အပြင်ဘက်ထုတ်ထားပါ။
တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်မည့် လက်နက်ကိရိယာများ
၁။ ၀က်အူလှည့် (+, -) ၂။ ဓါး
၃။ ခဲတံ ၄။ ပေတံ
၅။ တူ ၆။ ရေချိန်
တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းများ (ရေခဲသေတ္တာဝယ်စဉ်ကတည်းက အတူပါလာပါမည်။)
တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သော ပြတင်းပေါက်အရွယ်အစား
စနစ်တကျတပ်ဆင်မှသာ လေအေးပေးစက် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မည်။
၁။ မိမိအိမ်မှ ပြတင်းပေါက်အရွယ်သည် ၀ယ်ယူလာသည့်လေအေးပေးစက်နှင့် အထိုင်မကျပါက (သေးလွန်း၊ ကြီးလွန်းနေပါ က) လက်သမားခေါ်ပြီး ပြန်ပြင်ရန် လိုပါသည်။ ပြတင်းပေါက်နှင့် လေအေးစက်အကြား အပေါက်ကြီးဖြစ်မနေရန် အရေးကြီး ပါသည်။ ဟ,နေသောနေရာများကို သုံးထပ်သားပြားနှင့် ပိတ်နိုင်ပါသည်။
၂။ ပုံ(ခ) တွင်ကြည့်ပါ။ အတွင်းဘက် ပြတင်းပေါက်ဘောင်သည် အပြင်ဘက် ပြတင်းဘောင်ထက် လက်မသုံးမတ်ခန့် ပိုမြှင့် ထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ လေအေးစက်မှ ကျလာသော ချွေးများ အပြင်ဘက်သို့စီးသွားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အထိန်းပြား (guide panel) (ဆ) ကို ၀က်အူအတိုလေးများ (က) ဖြင့် တပ်ဆင်ပါ။ ၀က်အူလှည့်အရှည်ကိုသုံးလျှင် ပိုအဆင်ပြေပါသည်။
၄။ ကော်ပါသောဖော့ပြား(င) ကို ပြတင်းပေါက်ဘောင်တွင် ကပ်ပါ။ ပြတင်းပေါက်နှင့် လေအေးစက်အကြား လေလုံစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဖော့ပြားမလောက်ပါက ပိုလီဖောင် (poly foam) ဖော့တုံးများ ညှပ်ထည့်နိုင်ပါသေးသည်။
၅။ လေအေးစက်ကို ပြတင်းပေါက် အလယ်တည့်တည့်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ရန် ပြတင်းပေါက်အလယ်မှတ်ကို မျဉ်းသားပါ။
၆။ အလယ်မျဉ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက် ၈ လက်မစီခွာပြီး L ဘရက်ကက် (ဃ) များတပ်ဆင်ပါ။ တပ်ရာတွင် ၀က်အူအတို (က) နှစ်လုံး သုံးပါ။ ဘရက်ကက်များကို ပြတင်းဘောင်နှင့် ထိထားပါ။ ထိုဘရက်ကက်များသည် လေအေးပေးစက်ကို ထိန်းထားရန် ဖြစ်၏။
သတိ။ ။ အောက်ပါအဆင့်တွင် လေအေးပေးစက်ကို ပြတင်းပေါက်ဘောင်ထဲ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ တပ်ဆင်ရာတွင် လေအေးပေးစက် အထိုင်မကျမချင်း လက်မလွှတ်ပါနှင့်။ သေသေချာချာ ကျကျနန တပ်ဆင်ပြီးသွားမှ စိတ်ချလက်ချ လွှတ်ပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် လွတ်ကျကာ စက်ပျက်တတ်သည်။ လူကိုလည်း ထိခိုက်တတ်သည်။
၇။ လေအေးပေးစက်ကို လူနှစ်ယောက် သေသေချာချာ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကိုင်တွယ်ကာ မ,ပြီး ပြတင်းပေါက် ဘောင်အတွင်း ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ။ လေအေးစက်အောက်မှ အထိန်းသည် L ဘရက်ကက်၌ သေသေချာချာ ထိုင်နေရန် အရေးကြီးပါ သည်။ L ဘရက်ကက်ပေါ်တွင် လေအေးစက် ကျကျနန အထိုင်ကျသွားပြီဆိုပါက လေအေးပေးစက် နေရာတကျဖြစ်သွား ပြီဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် လေအေးပေးစက်သည် ပြတင်းပေါက် အလယ်တည့်တည့်၌ ရှိနေပါမည်။
၈။ လေအေးပေးစက် နေရာတကျဖြစ်သွားသည်နှင့် အပေါ်ပိုင်းမှကိုင်ကာ နောက်သို့ အနည်းငယ် လှန်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ အပေါ် အထိန်းပြားနှင့် ပြတင်းဘောင်ညပ်သွားကာ ငြိမ်သွားပါလိမ့်မည်။ နောက်သို့အနည်းငယ် စောင်းနိမ့်နေပါမည်။
၉။ အထိန်းပြား (ဆ) ကို ပြတင်းဘောင်တွင် နေရာတကျချပြီး ၀က်အူအရှည် (ခ) လေးလုံးဖြင့် စွဲပါ။ ထို့နောက် ပြတင်းပေါက်မှ လပ်နေသောနေရာများတွင် ဖော့တုံး (စ) ဖြင့်လိုက်ပိတ်ပါ။ L ဘရက်ကက်ကို ၀က်အူအတို (က) ဖြင့်စွဲပါ။
၁၀။ နောက်ဆုံးတွင် ၀က်အူအရှည် (ခ) ဖြင့် ထောက်ခံဘရက်ကက် (ဇ) ကို လေအေးစက် ယာဘက်တွင် အသေစွဲလိုက်ပါ။
ယခု အသင်၏ လေအေးစက် တပ်ဆင်ပြီးသွားပါပြီ။ ထို့နောက် မီးကြိုးကို ပလပ်တွင် သေချာစွာထိုးပါ။
၁။ မီးခေါင်းပလပ်ကို ဆော့ကက်အတွင်း သေသေချာချာ ထိုးပါ။
၂။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုအတွက် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များကို တိတိကျကျ လိုက်နာပါ။ မီးကြိုးကို မူလပါလာသည့် မီးကြိုးသာသုံးပါ။ မိမိသဘောနှင့် ပြုပြင်မသုံးပါနှင့်။
၁။ လေအေးကို မိမိထံတိုက်ရိုက်တိုးနေခြင်းမျိုးရှောင်ပါ။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်တတ်သည်။
၂။ အခန်းတွင်း၌ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း မီးခိုးများမွှန်နေလျှင်၊ သို့မဟုတ် လေသန့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်လျှင် ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ပြီး ပြင်ပလေ ရယူပါ။
အဝေးထိန်းခလုတ် (Remote Control) အသုံးပြုပုံ
ဤတွင် ယေဘူယျအဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော ခလုတ်များအကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ လေအေးပေးစက် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ခလုတ်အနေအထားများ ပြောင်းတတ်သော်လည်း ယေဘုယျ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ အတူတူပင် ဖြစ်ပါ သည်။
အဝေးထိန်းကိရိယာများတွင် သုံးသည့်ဓါတ်ခဲမှာ များသောအားဖြင့် အေသုံးလုံး (AAA) အရွယ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အသေ မှတ်မထားပါနှင့်။ ဓါတ်ခဲအိမ်ကို ဖွင့်ကြည့်လျှင် ဓါတ်ခဲအရွယ် နှင့် အစွန်း (+, -) တို့ကို ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်။ ဤအရွယ်အတိုင်း ဓါတ်ခဲကို ရွေးပါ။ ဓါတ်ခဲထည့်လျှင် (+, -) မှန်အောင်ထည့်ပါ။
အောက်တွင် အဝေးထိန်းခလုတ်ပေါ်ရှိ အမှတ်အသားများအကြောင်း ရှင်းပြထားပါသည်။
လေအေးပေးစက်၏ အပူထိန်းခလုတ်ကို အအေးဆုံးသို့ တင်ထားပြီဆိုပါက လေလာရာလမ်းကို လူများရှိရာ၏ အထက်ဘက်သို့ တင်ထားသင့်ပါသည်။
သန့်ရှင်းရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၁။ လေအေးပေးစက်မှ လေစစ်ဆန်ခါများကို ပုံမှန်ဆေးကြောသန့်ရှင်းပေးပါ။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လေအေးပေးစက် ရှေ့အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး လေစစ်ဆန်ခါကို ထုတ်ယူပါ။
၂။ ထို့နောက် လေစစ်ဆန်ခါကို ရေနှင့်ဆေးကြောပါ။
၃။ ရေဆေးပြီးသော ဆန်ခါကို ညင်သာစွာလှုပ်ခါပြီး ရေများကို ခါထုတ်ပါ။ ထို့နောက် ဆန်ခါကို ပြန်တပ်၍ ရပါပြီ။
၄။ ဖုံထူထပ်သော ဒေသများတွင် ဤကဲ့သို့ သန့်ရှင်းခြင်းကို မကြာမကြာ ပြုလုပ်ပေးရန် လိုပါသည်။
၅။ ရှေ့အဖုံးကို ဖြုတ်ပြီးသန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ပါက အောက်ပါအတိုင်းဖြုတ်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းရာတွင် ဆပ်ပြာနှင့်ရေကို သုံးနိုင်ပြီး ချေးချွတ်ဆေးများသုံးရန် မလိုပါ။ အပြင်းစား ချေးချွတ်ဆေးများသည် လေအေးပေးစက်၏ မူလ အရောင်ကို ပျက်စေပြီး ခိုင်ခံ့မှုကိုလည်း အားနည်းသွားစေတတ်ပါသည်။
၁။ လေအေးပေးစက်ကို သန့်ရှင်းရာ၌ မည်သည့်အခါမှ ရေနှင့်လောင်းပြီး ဆေးကြောခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ ဓါတ်လိုက်တတ်သည်။
၂။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း လုပ်သည့်အခါတိုင်းတွင် လေအေးပေးစက်ကို ပိတ်။ ပလပ်ကိုချွတ်ထားပါ။
၃။ လေအေးပေးစက် ပျက်ပြီဆိုလျှင် ပြင်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ပြင်တတ်သူကိုခေါ်ပါ။ သို့မဟုတ် ဆိုင်သို့ပို့ပါ။ တတ်ယောင်ကားများခေါ်ကာ မပြင်ပါနှင့်။ အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေတတ်သည်။
လေအေးပေးစက် အလုပ်မလုပ်တော့လျှင် အောက်ပါအချက်များကို ဦးစွာစစ်ပါ။
၁။ လေအေးပေးစက် ပလပ်ဟာ လွတ်နေသလား၊ မမိတမိဖြစ်နေသလား။
၂။ လေအေးပေးစက်က ဘရိတ်ကာ(breaker) ကျနေသလား။ ဖျူ့စ် (fuse) ပြတ်နေသလား။
၁။ အဝေးထိန်း (remote) ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရဲ့လား။ ဓါတ်ခဲအားကုန်နေပြီလား။
၂။ အပူချိန်ကို ချိန်ထားတာ မှန်ရဲ့လား။ အပူချိန်သိပ်မြင့်နေရင် အေးမှာမဟုတ်ဘူး။
၃။ လေအေးပေးစက် အပြင်ဘက်အပိုင်းကိုသွားကြည့်ပါ။ ဘာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေသလဲ။ ပိတ်နေခဲ့ရင် ရှင်းပေးပါ။
၄။ ရှိသမျှတံခါးနဲ့ ပြတင်းအားလုံးကို ပိတ်ပါ။ အခန်းထဲမှာ အပူထွက်နေတဲ့ ရေနွေးအိုးလိုပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
၅။ လေအေးပေးစက်က လေစစ်ဆန်ခါမှာ ဖုံးတွေသိပ်ကပ်နေပြီလား စစ်ပါ။ ဖုံတွေကို အထက်မှာပြောခဲ့သလို ရေနဲ့ဆေးပါ။
အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာ လေအေးပေးစက်ဟာ ပုံမှန်ပါ။ ဘာမှ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
၁။ လေအေးစက်ကိုဖွင့်ထားစဉ် စက်ထဲက ရေသံ၊ ပိုက်သံတွေကြားနေရရင် စိတ်မပူပါနဲ့။ လေထု သိပ်ပြီး စိုထိုင်းဆများလာရင် ဒါမှမဟုတ် မိုးရွာနေရင် စက်က ပိုတဲ့ရေငွေ့တွေကို အလိုအလျောက် ထုတ်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ တစ်ခါတစ်လေ သာမိုစတက်က ကလစ်ကနဲ အသံမြည်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဟာ သာမိုစတက်က အပူချိန်ကို အလိုအလျောက် ထိန်းပေးနေတာဖြစ်လို့ ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
၃။ လေအေးပေးစက်နောက်ကနေ ရေတွေ တစ်စက်စက်ကျနေတာတွေ့ရရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ကွန်ဒင်ဆာက ချွေးကျ တာပါ။
၄။ ကွန်ဒင်ဆာက ဘာသံမှမကြားရပဲ ပန်ကာလည်နေတာလည်း ပုံမှန်အခြေအနေပါပဲ။
ရည်ညွှန်းကိုးကားစာအုပ်စာတမ်းများနှင့် Website များ
1. LG Window Type Airconditioner Owner’s Manual, Model L8004R, L1004R, CL8000ER
2. Gold Star Room Airconditioner Service Manual, Model BG8000ER, WG8005R, WG1005R, WG1205R
Window Type လေအေးပေးစက်အကြောင်း ပြီးပါပြီ။
Posted by အေးငြိမ်း at 11:53 PM
Labels: Fridge and Aircond
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပညာရပ်တွေကို အခုလို အခမဲ့ အချိန်ပေးပြီး ဖြန့်ဝေပေးနေတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။ အမြဲတမ်းလည်း ကိုအေးငြိမ်းရဲ့ ဘလော့က ပိုစ့်အသစ်တွေကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု့နေပါတယ်။
ကိုအေးငြိမ်းရဲ့ စာတွေက ကျွန်တော်တို့လို ကျွန်း(စင်္ကာပူ) ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်သားတွေအတွက် အသိအလင်းရောင် တစ်ခုပါပဲ။ ဆက်လက်ပြီး အခုလို အကျိုးရှိတဲ့ ပညာရပ်များ ဆက်ဆက်ဖြန့်ဖြူးဝေငှနိုင်ပါစေဗျာ။
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇေကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်အချိန်ရတိုင်း ဆက်ရေးသွားပါမယ်။
လေအေးပေးစက် စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း နှင့် ထိန်းသိမ်းန...
လေအေးပေးစက် စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း နှင့် ထိန်းသိမ်းန...
ရေခဲသေတ္တာ အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ (၂)
ရေခဲသေတ္တာ စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း နှင့် ထိန်းသိမ်းနည်...
Civil Engineer ဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲ
မြန်မာစာသည် တို့စာ (၁)